Izindaba - I-Natural Slate Serving Plate
I-Natural Slate Serving Plate
Amasethi ethebula le-Slate Plates anezinzuzo ezimbili ezihlukene uma kuqhathaniswa namasethi avamile:
Okokuqala, ziqinile kakhulu ngokumelene nemihuzuko futhi okwesibili, kulula ukuzikhulula kuzo zonke izindawo.
Amapuleti e-slate awagcini nje ngokuhlaba umxhwele ngomklamo wawo omkhulu futhi okhangayo, kodwa futhi nangokuhlukahluka kwawo okusebenzayo. Angasetshenziswa njengamasethi wetafula wezilungiselelo zetafula, njengamapuleti okuphakela izitsha ezinhle, njengamaphilisi noma njengama-coasters ezimbali nokunye okuningi.
Noma ngabe njengomethi wendawo ohlobisa lapho ongabonisa khona izilungiselelo zakho zendawo enhle noma uku-oda izitsha ngokuqondile, nge-slate placemat uzokwazi ukujabulisa wonke umuntu.
Futhi kusukela ekubukeni kwemvelo, amabhodi e-slate ayisinqumo esihle kakhulu, i-slate iyitshe lemvelo elingadingeki likhiqizwe njengezinye izinto.
Zonke lezi zimfanelo zenza i-placemat ye-slate ingagcini nje ngokubamba ukubukeka kwangempela, kodwa ingaphinda ithole amaphuzu kuma-ecology kanye nezimpikiswano ezingokoqobo.
Amabhodi amahle amise okwesandla esileyithi semvelo abonisa unqenqema oluvulekile oluhlukile, ahlinzeka ngesisekelo somhlaba soshizi, ama-charcuterie noma ama-appetizers. Bhala ngokuqondile emabhodini kashizi we-slate ngoshoki ukuze ulebule okukhethiwe okufakiwe; umane usule ngendwangu emanzi. Ukusekela okuzizwayo kuvikela amatafula.
I-Rustic Style Slate Serving Board- 100% Eyenziwe Ngesandla kusuka ku-Natural Stone Slate, indawo enhle yemvelo izokwenza itafula lakho lokudlela lihluke kakhulu. Indlela enhle yokuphakela ushizi, uphudingi nama-appetizers. Ilungele ukuzijabulisa, ukukhonza, ukuhlobisa nokunye.
Kwenziwe Ikhwalithi Ephakeme Yesilayidi Semvelo. Ibhodi lesilayidi ngalinye lihlukile elinamachopho aqoshiwe. Igcotshwe ngamafutha amaminerali ukuze kukhishwe ubuhle bemvelo!
Ngenxa yezinto ze-slate zemvelo, zintekenteke futhi izinto ezibukhali (imimese, izimfoloko, njll.) zingase zinwaye indawo yayo. HHAYI i-microwave, umshini wokuwasha izitsha, ihhavini nesitofu esiphephile. Insipho yokugeza izandla kuphela.
Isikhathi sokuthumela: Jul-05-2021